कास्कीका तीन ठाउँमा पहिरोमा परी पाँचजनाको मृत्यु, १२ जना घाइते | रेडियो झापा 100.7 MHz.
कास्कीका तीन ठाउँमा पहिरोमा परी पाँचजनाको मृत्यु, १२ जना घाइते
रेडियो झापा 100.7 MHz. शुक्रबार, आषाढ २६, २०७७ २०:१३:२३
कास्की । कास्कीका तीन ठाउँमा आएको पहिरोमा परी पाँचजनाको मृत्यु र १२ जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवास हमालका अनुसार पोखरा महानगरपालिका–१८ सराङकोटको गोठादीमा पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ। बिहीबार राति करिब साढे २ बजे माथिबाट झरेको पहिरोले स्थानीय टंकबहादुर थापाको घर पुरिँदा सोही घरका सदस्य र पाहुना भई आएका चारजनाको मृत्यु भएको छ। नौजना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेहरूमा ५० वर्षीय टंकबहादुर थापा, उनकी श्रीमती ४५ वर्षीया सोममाया, ११ वर्षीया ईशीका थापा र मृतक टंकको दाइको नाति ६ वर्षीय सुवान थापा रहेका छन्।
यस्तै, टंककी छोरी २२ वर्षीया पिंकी, १८ वर्षीया आशा, पिंकीकी पाँच वर्षीया छोरी पिरिशा, तनहुँको दमौली घर भएकी २८ वर्षीया सरस्वती श्रेष्ठ (मृतक सोममायाकी बहिनी), सरस्वतीका छोरा आठ वर्षीय शीतल, १० वर्षीय सन्देश, छिमेकी १९ वर्षीय अनिश तामाङ, १९ वर्षीया रशी थापा र १९ वर्षीया रश्मि थापा रहेका छन्। घाइतेमध्ये केही पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा र केहीलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचारको लागि लगिएको छ। उनीहरूको टाउको, हातखुट्टा, छातीलगायत शरीरका विभिन्न ठाउँमा चोट लागेको छ। घाइते सबैको अवस्था मध्यम रहेको बताइएको छ।
पोखरा महानगरपालिका–२५ हेम्जामा गएको पहिरोमा परी एक ७० वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय रामचन्द्र अधिकारीको घर पहिरोमा पुरिँदा उनकी आमा भीमकली अधिकारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको कास्की प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी हमालले जानकारी दिए। छोरेपाटनमा तीनजना घाइते पोखरा महानगरपालिका–१८ छोरेपाटनस्थित सिमलटुँडामा आएको पहिरोमा परी तीनजना घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार स्थानयि चन्द्रबहादुर मगरको घर माथिबाट खसेको पहिरोमा परी मगरसहित उनकी श्रीमती शान्ति र छोरा सुशान मगर सामान्य घाइते भएका छन्। उनीहरूको नमस्ते अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।